एकै प्रतियोगिताका टोलीमा भिन्नता किन यति धेरै ? - Kheladi News Kheladi News
फागुन ९ गते २०७७ मा प्रकाशित
काठमाडौं, फागुन ९ । राष्ट्रिय फुटबलको मेरुदण्ड मानिने राष्ट्रिय महिला लिग शुक्रबार दशरथ रंगशालामा समापन भयो । तीन विभागीय र चार मोफसलका टोलीलाई समावेश गरि सञ्चालन गरिएको लिगमा कुनै टोली प्रतिद्वन्द्वी विरुद्ध निकै हावी हुँदा कुनै टोली भने निरिह बने । एउटै प्रतियोगितामा सहभागि टोलीको खेलमा किन यस्तो भिन्नता भयो ?
विभागीय टोली मध्येको एपिएफले प्रतिद्वन्द्वीविरुद्ध फराकिलो जितसहित अपराजित रहँदै उपाधि उचाल्दा उदयपुरको चौदण्डीगढी भने अंक तालिकामा अंक विहिन हुँदै घर फर्किएको छ । भनिन्छ, प्रतिस्पर्धा भए खेलाडीको खेल विकास हुन्छ, राम्रो भन्दा राम्रो नतिजालाई खेलाडीले मिहिनेत गर्छ ।
सम्पन्न लिगमा उपाधि जित्ने र अंक विहिन हुँदै लिग समापन गर्ने टोलीको खेल प्रदर्शन तुलना गर्दा सहभागिता औपचारिकता जस्तो मात्र देखिएको छ ।
मोफसलबाट सहभागिता जनाउने टिम र अन्य टीमको प्रदर्शनमा किन भिन्नता आकाश पातलको देखियो ।
प्रतियोगिता आयोजना गर्नुको उद्देश्य प्रतिभावान खेलाडीको खोजी गर्दै भएको राष्ट्रिय टोलीलाई जति सक्दो बलियो बनाउनु हो । तर सम्पन्न प्रतियोगिताबाट नयाँ खेलाडीको उदय भन्दा पनि टिठ लाग्दो महिला फुटबल अवस्था छर्लङ्ग भएको छ । मोफसलको फुटबलबाट राष्ट्रिय टोलीमा नयाँ अनुहार देख्न कठिन झनै प्रस्टाएको छ ।
विभागबाहेक अन्य टोलीबाट नयाँ खेलाडी कति सम्भावन देखियो त भन्न प्रश्न विजेता टोलीकी मुख्य प्रशिक्षक भगवती थापाले विगताका संस्करणमा भन्दा अहिलेको लिगमा मोफसलका टोलीमा सुधार आएको प्रतिक्रिया दिइन् ।
प्रतियोगितामा सहभागि टोलीले प्रतिद्वन्द्वीविरुद्ध गरेको गोल अन्तरलाई नियाल्दा राष्ट्रिय टोलीको प्रतिस्पर्धा भन्न अलि हिचकिचाउनु प¥यो । एकै खेलमा कुनै टोलीले २२ गोल गर्दा कुनै टोलीले एक गोल पनि फर्काउन नसक्नुले राष्ट्रिय प्रतियोगिताप्रति प्रश्न उब्जिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा गोल गरिरहेका खेलाडीलाई आराम दिएर नयाँ खेलाडीलाई किन स्थान निदइएको भन्ने जिज्ञासामा एपिएफकी प्रशिक्षक थापाले सिनियर खेलाडीको प्रेरणा र साथले टोली राम्रा गर्ने भएकाले अनुभवि खेलाडीलाई मैदानमा उत्रारिएको बताइन् ।
‘केही नयाँ खेलाडी टोलीमा रहेका छन्,’ एपिएफकी प्रशिक्षक भगवती थापाले भनिन्, ‘लिग खेल हो । गोल अन्तरमा पनि कहिले काँही विजेताको टुङ्गो लाग्छ । हामीलाई सबै गोलको उत्तिकै महत्व रहेको थियो । आर्मीले पनि जितलाई निरन्तरता दिँदै उपाधिका लागि दावेदारी दिइरहेको थियो । सोही अनुसार हामीले गोललाई प्राथमिकता दिएका थियौं । प्रत्येक गोलको उत्तिकै महत्व रहेको थियो ।’
नेपाली महिला राष्ट्रिय लिगमा यसपटम विदेशी खेलाडीलाई मैदान उत्रार्ने प्रयास पनि भए । चार खेलाडी अनुबन्ध गर्न पाउने प्राब्धान रहँदा दुई टोलीले विदेशी खेलाडीलाई स्थान दिए । विदेशी खेलाडीलाई सहभागिता गराइएको टोलीमा विदेशी खेलाडीको प्रदर्शन हावी हुँदा अन्य नेपाली खेलाडीले आझेमा नै परे जस्तो देखियो । यद्यपि बलियाविरुद्ध भने विदेशी खेलाडीको प्रदर्शन पनि सोचे जस्तो देखिएन् ।
निकै व्यस्त तालिकाका साथ सञ्चालन गरिएको प्रतियोगितामा खेलाडीको चोटले टोलीमा समस्या देखियो । राष्ट्रिय टोलीकी स्ट्राइकर समेत रहेकी एपिएफकी स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारी चोटकै कारण कम्तीमा पनि नौ महिना बाहिर रहनु पर्नेछ । चोटका कारण अन्तिम दुई खेल गुमाएका राष्ट्रिय टोलीकी समेत स्ट्राइकर रहेकी सावित्रा भण्डारीले टोलीको मिहिनेतले अपराजित यात्रालाई अन्तिम खेल सम्म निरन्तरता दिँदा उपाधिको हकदार भएको प्रतिक्रिया दिइन् ।
‘अन्तिम खेलमा आर्मीविरुद्ध जित निकाल्दा एपिएफ बलियो टोली हो भन्ने सिद्ध भएको छ,’ नेपाली फुटबलकी गोल मेसिनको रुपमा परिचय बनाएकी सावित्राले भनिन्, ‘चोटले म मैदान बाहिर रहे पनि टोलीले कठिन प्रतिद्वन्द्वी विरुद्ध पनि जित निकाल्न सफल भयौं ।’
खेल दौरानमा नियमित गोलकिपरको अभाव टोलीमा देखिनाले स्ट्राइकरले गोलकिपरको पोस्ट सम्हाल्नु पर्ने भयो ।
त्यसो त नेपाली महिला फुटबलमा पुरुष प्रतियोगिताको तुलनामा महिला प्रतियोगिता कमै संख्यामा हुन्छन् । प्रतियोगिता नभइरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय लिग जस्ता प्रतियोगित हुनेले आफूहरुलाई अनुभव सगाल्ने मौका भएको कतिपय खेलाडीले सकारात्मक तरिकाले व्याख्या गरिरहेका पनि छन् भने कोहीले महिला फुटबलको विकासका लागि सहयोगको खाँचो रहेको पनि खेलाडीले भन्दै आएका छन् ।
राम्रो नतिजालाई खेलाडीले लामो समय फुटबलमा नै विताउनु पर्छ । छिटफुट हुने प्रतियोगितामा खेलाडीबाट आशा गर्नु पनि महत्वकांक्षा पनि हुन सक्छ । फुटबलको नियमक निकाय एन्फाले यस्ता खाले प्रश्नबाट आलोचित हुन उचित कदम चाल्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ ।